9 Waxyaabood Oo Nin Kasta Uu Ka Rabo Gabadha Uu Doonayo Inuu Guursado - Aayaha
Waxaan idiin soo gudbineynaa 9 waxyaabood uu ninka ka filayo haweeneyda uu guursan rabo.
Ragga muhiim ayay u tahay kalsoonida marka ay dooranayaan xaas. Waxay haweeneyda ka filayaan inay noqoto qof kalsooni leh isla markaana daacad ah. Xittaa ragga qiyaanada sameeya ee aanan aaminka ahayn waxay rabaan xaas ay aamini karaan.
Haweeney aanan fowda badneyn/degan
Nin kasta waxa uu doonayaa guri nabad ah, iyo haweeney aanan xiisad badneyn. Nin kasta wuxuu kuu sheegayaa inay ka baqaan haweenka fudud edagaalka badan waana sax. Ragga waxay rabaan inay la aqal galaan haweeney degan oo aanan fowdo la imaaneyn.
Ragga waxay rabaan in xaasaskooda ay noqdaan taageerayaashooda. Nin kasta wuxuu xaaskiisa ka filaa inay taageerto; waxay rabaan haweeney ku taageereysaa marxalad walba, waqtiga wanaagsan iyo kan xunba.
Haweenka waa maamulayaasha guryaha — xaiiqda ayaa ah in ragga ay xaasaskooda ka rabaan inay noqdaan maamuleyaal wanaagsan marka la eego hantida uu seyga soo shaqeeyo oo aysan noqon wax ku ciyaar.
Jacayl shuruud la’aan ah
Haddii uu ku jiro xaalad wanaagsan ama uu jeeb ahaan iska liito, ragga waxay rabaan in mar kasta la jeclaado oo xaasaskoosa jacayl ay ka helaan. Ragga waxay rabaan jacaylka waqti kasta iyadoo aanan loo eegeyn waxay sameeyaan iyo kuwa aysan sameeynin.
Nin kasta waxa uu rabaa in xaaskiisa uu xushmad ka helo; waxa uu doonayaa inay qadariso haddii uusan taas ka helin waxay dhaawacaysaa dareenkiisa iyo hamigiisa, ma jiro nin doonaya xaas aanan lahayn qadarin, oo afxun isla markaana aflagaado badan.
Nin kasta waxa uu ka ravaa xaaskiisa raaxo iyo inay wada yeeshaan guur raaxo leh; ragga ma rabaan kaliya galmo balse raaxo marka ay la joogaan lamaanayaashooda. Waxay rabaan xaas dareen ahaan loo heli karo, mana ahan mid ay ka baryayaan inay dareen yeelato.
Ragga ma rabaan in been loo sheego; waxay rabaan in xaaskooda ay daacad noqoto isla markaana sirta iyo beenta ay iska ilaaliyaan.
Ragga waxay rabaan xaas wax fahamta oo warkooda maqasha, teegeerta iyo mid cafineysa marka ay sameeyaan qalad. Ragga badankood ma ogolaanayaan haweeney qalbi adag.
Previous articleUGAAR AH RAGGA: 6 Qaabood Oo Lagu Kasbado Qalbiga Haweeney (Waxyaabahan Usameey)
Next articleDaawo: Mid Kamid Ah Fanaaniinta Ugu Caansan Somalia Oo Fanka Isaga Baxday
Dheyman luula November 25, 2018 At 6:09 pm
I liked your posts and I support this page
Aayaha editor - August 1, 2019 0
What you do for a livelihood, how you dress, what you eat, your sleeping habits, all have effects on how young or old you...
“Gabar baan ahay balse booliska Soomaaliya waxay dhaheen wiil baa tahay”...
3 Waxyaabood oo aad u sameyn doonto qofka haddii aad si...
Saddexdaan Waxyaabood Ka Feker Kahor Inta Aadan Dib Ugu Laaban Nin...
LAYAABKA: Haweeney iibsatay Canugeeda oo maalmo dhalan si ay taleefan u...
Qiso xanuun badan: Laba arrimood filo hadii aad guursato lammaane ajanabi...
3 Qaab Oo Marka Xaaskaaga Ay Uur Leedahay Loogu Noqdo Seey...